पश्चिमी सीमामा सधैं तनाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पश्चिमी सीमामा सधैं तनाव
वैशाख २७, २०७५ भवानी भट्ट
पुनर्वास (कञ्चनपुर) — पुनर्वास नगरपालिका–९ बिचफाँटाका गोपाल शाहीले ४ वर्षदेखि आफ्नै जमिनमा खनजोत गर्न पाएका छैनन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले उक्त जमिन आफ्नो भूमिमा पर्ने दाबी गर्दै खेती गर्न रोक लगाएको हो । करिब ५ कट्ठा ऐलानी जमिन बाँझो छ ।
कञ्चनपुरको बिचफाँटा क्षेत्रमा रहेको प्याराताल । तस्बिर : भवानी
दुई साताअघि त्यही जमिनमा स्थानीयले वन्यजन्तु रोक्न विद्युतीय तारबार गरे । भारतीय वन क्षेत्रबाट नेपाल पस्ने वन्यजन्तु रोक्न तारबार लगाउने काम भइरहेको थियो । एसएसबी आएर बार लगाउन रोक मात्र लगाएन, खम्बा नै उखेलेर फालिदियो । स्थानीयको सुझबुझले भने अप्रिय घटना हुन पाएन । सीमास्तम्भ १९४ बाट १ किमिवरै तारबार लगाउने कार्य भइरहेको थियो । पुनर्वास नगरपालिकाको ६ लाख आर्थिक सहयोगमा बिचफाँटाको करिब ८ सय मिटर लम्बाइमा तारबार गरिँदै थियो । ‘आनन्द बजारको घटना दोहोरिने जस्तो परिस्थिति बन्यो,’ शाहीले भने, ‘स्थानीय र एसएसबीका बीच केहीबेर भनाभन भयो, प्रहरी र जनप्रतिनिधि आएर घटना साम्य पारे ।’
तनावपछि काम रोकिएको छ । उखेलिएका पोल छरपस्ट छन् । दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीका बीचमा संयुक्त सीमा सर्भे टोली नआउँदासम्म काम अगाडि नबढाउने सहमति भएको छ । नापी टोली आउने टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन । उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा चाँडोभन्दा चाँडो टोली आएर विवाद मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘डर र त्रासमा कतिन्जेल बस्नु ? आफ्नो जमिन निर्धक्क उपयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ सोही ठाउँका अर्का स्थानीय बुदे शाहीले भने ।
२०७३ फागुनमा पनि यस्तै विवादले उग्ररूप लिँदा एसएसबीको गोलीले एकजना नेपालीको ज्यान गएको थियो । गाउँ नजिकैको नालामा ह्युमपाइप राख्ने विषयमा विवाद हँुदा एसएसबीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय गोविन्द गौतमको मृत्यु भएपछि बढेको तनाव अझै शान्त भइसकेको छैन । घटना हुनुभन्दा अघि स्थानीय र दुवैतर्फका सुरक्षा निकायबीच ह्युमपाइप राख्न दिने सहमति भएको थियो । एसएसबीले दशगजामा परेको दाबी गर्दै अवरोध पुर्‍याउँदै आएको थियो ।
‘बिचफाँटामा पनि त्यही घटना दोहोरिन सक्थ्यो,’ पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा विष्टले भनिन्, ‘विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौं, सुरक्षा निकायले पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’ एसएसबीको पटक–पटकको हस्तक्षेपले बिचफाँटावासी निकै आक्रोशित भएको उनले बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले संयुक्त सीमा सर्भे टोली मगाउने विषयमा केन्द्रमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘बिचफाँटाको विषयमा राष्ट्रिय सभामा पनि सोमबार कुरा उठेकाले अब केन्द्रीयस्तरबाटै कूटनीतिक पहल हुन्छ भन्ने आशामा छौं,’ उनले भने । गत साता प्रदेशसभामा पनि सीमा विवादको विषयले पहिलोपटक प्रवेश पाएको थियो । आन्तरिक मामिलामन्त्री उक्त विषयमा प्रवेश गरेका थिए ।
सर्भे टोली अहिले कैलालीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यहाँ काम सकिने बित्तिकै कञ्चनपुर आउने जानकारी प्रजिअ खड्काले दिए । तर, यो वर्ष सर्भे टोलीले काम गर्ने समायावधि भने अब १ महिनामात्रै बाँकी छ । वर्षात सुरु भएपछि सर्भेको काम रोकिने भएकाले त्यसअघि नै विशेष टोली मगाउने विषयमा छलफल भइरहेको खड्काको भनाइ छ ।
यसकारण तारबार ?
बिचफाँटा भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्र हो । निकुञ्जबाट आउने हात्तीको बथान तथा अन्य वन्यजन्तुले नेपाली बस्तीमा पसेर बर्सेनि बाली नोक्सानी गर्दै आएका छन् । त्यसैले उक्त क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार लगाउन थालिएको हो ।
गत वर्ष पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको शुक्लाफाँटा कार्यक्रमले तारबारका लागि सहयोग गरेको थियो । वन्यजन्तु रोक्न तारबार प्रभावकारी देखिएपछि यस वर्ष नगरपालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
हात्तीको बथान बस्तीमा पसेर धान, गहुँ र उखु बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसान मारमा छन् । कतिपयले वर्षाैंदेखि आफ्नो जमिन बाँझै छाडेका छन् । मजदुरी गरेर जीविका धान्नुपर्ने बाध्यता छ । खेती नष्ट हँुदा लगानीसमेत नआउने भएकाले स्थानीय कृषकले तारबारको माग गर्दै आएको बुदे शाहीले बताए । जंगली हात्तीकै आक्रमणमा परी पुनर्वास नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा ३ वर्षमा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । केही वर्षयता मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बल्झिँदै प्याराताल विवाद
सीमास्तम्भ १९४ र १९५ भन्दा झन्डै ५ सय मिटर वरै पर्छ, प्याराताल । भारतीय पक्षले उक्त ताल आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबीसहित विवाद झिक्दै आएको छ । पछिल्लो समय यो विवाद बल्झिँदै गएको छ । तालमा माछा मार्ने ठेक्का लाग्दै आएको थियो । अहिले एसएसबीले माछा मार्न रोक लगाएपछि विवाद बढेको हो ।
विगतमा एसएसबीले आधा तालमा माछा मार्न दिए पनि गत वर्षदेखि पूरै ताल भारतमा पर्ने दाबी गर्दै माछा मार्न जाने नेपालीलाई पक्राउ गरी कुटपिट गर्न थालेको छ । ‘अहिले तालमा माछा मार्न जाँदा एसएसबीको टोली आएर समातेर लैजान्छ,’ वर्षांैदेखि तालमा माछा मार्दै आएका स्थानीय धर्म विकले भने, ‘क्याम्पमा लगेर कुटपिट गरेर छाड्छ ।’
अर्का स्थानीय बृखबहादुर सुनारले सीमास्तम्भ तालभन्दा धेरै पर रहेको बताए । ‘अनि पिल्लरभन्दा यताको भाग कसरी भारतमा पर्छ,’ उनले प्रश्न गरे । ८/१० वर्षअघि ताल वरिपरिको क्षेत्रमा स्थानीयले गाईबस्तु चराउँथे । अहिले एसएसबीले त्यसमा पनि रोक लगाएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिका ९ बिचफाँटादेखि धनसिंहासम्म करिब ६/७ किलोमिटर क्षेत्रमा लाम्चो आकारमा प्याराताल फैलिएको छ । बिचफाँटामा मूल फुटेर बनेको ताल बगेर भारततिरै जान्छ । तर भारतीय पक्षले केही वर्षदेखि उक्त तालमा आँखा गाडेको स्थानीय केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
२०४६ अघिसम्म उक्त तालमा माछा मार्न तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले ठेक्का दिने गरेको तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार ०४६ देखि भारतीय पक्षले विवाद गरेपछि दुवैतर्फबाट आधा–आधा तालको ठेक्का लाग्न थालेको थियो । ‘गत वर्षदेखि भारतले ठेक्का लगाउन छाड्यो, एसएसबीले नेपालीलाई पनि माछा मार्न रोक लगायो,’ उनले भने, ‘यसरी प्याराताललाई विस्तारै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:४९
सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: प्रतिवादी प्रहरीका पुरानै बयान
पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरुले घटनामा आफूहरुको संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहँदा कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले भने सबैजसोको संलग्नता रहेको बयान दिएका छन्
वैशाख २७, २०७५ माधव घिमिरे, विनाेद भण्डारी
विराटनगर — सुन तस्करी र हत्या मुद्दाका प्रतिवादी पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले आफूहरूमाथिको आरोप सत्य नभएको दाबी गरेका छन् । जिल्ला अदालत मोरङलाई दिएको बयानमा उनीहरूले दुवै घटनामा आफूहरूको संलग्नता नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
अभियुक्तमध्येका कनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले भने प्रकरणमा सबैजसोको संलग्नता रहेको बयान दिएका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका ६३ मध्ये प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ३० अभियुक्तको बयान बुधबार सकिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहबरमा लिइएको बयानमा पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले यसअघि प्रहरीमा दिएको बयानमा उल्लेख भएकै कुरा दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले मुख्य आरोपी चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई चिन्दै नचिनेको दाबी पनि गरेका छन् । कतिपयले भने शाक्यको हत्यापछिको अनुसन्धानमा सहभागी भएकाले केही अभियुक्तलाई चिने पनि उनीहरूबाट कुनै अनुचित लाभ नलिएको एवं अवैध कामलाई नसघाएको उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाले मुख्य योजनाकार भनिएका चूडामणिलाई उनका बुवा नेत्रप्रसाद आफ्नो सहपाठी भएका नाताले चिनेको बयान दिएका छन् । २०७३ सालमा नेत्रप्रसादले फोन गरेर काठमाडौं, गौरीघाटस्थित घरमा आफूलाई बोलाएको र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो छोरो भनेर चूडामणिलाई चिनाएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाहेक गोरेसँग अरू भेटघाट र चिनजान नभएको निरौलाको दाबी छ । ६३ प्रतिवादीमध्ये प्रहरी संगठनमा आबद्ध दिवेश लोहनी, विकासराज खनाल, श्याम खत्री, सञ्जय राउत, विष्णुबहादुर खड्का र अमरबहादुर थापालाई मात्र आफूले चिनेको पनि उनले जनाएका छन् ।
प्रतिवादीमध्येका प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्काले बयानमा प्रहरीको ‘स्कर्टिङ’ मा सुन तस्करी हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । खडका त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीको चालकका रूपमा कार्यरत थिए । खत्री भने फरार छन् ।
मुख्य आरोपी चूडामणिको कोठामा फेला परेको रजिस्टरमा तस्करी गरिएको सुनको परिमाण र रकम लेनदेनको विवरण भेटिएको थियो । उक्त रजिस्टरमा ‘डीआईजी मामा’ भनेर पटकपटक रकम दिइएको विवरण प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको थियो । ‘डीआईजी मामा’ भनेको ‘गोविन्द निरौला सर हो’ भनी खडकाले प्रहरीमा बयान दिएका थिए । त्यही बयान उल्लेख गर्दै अदालतले सोधेको प्रश्नमा निरौलाले उक्त कुरा सरासर गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
जवान खड्काले भने तस्करीको सुनबाट भएको आम्दानी लेनदेनको विवरणमा उल्लेख गरिएका छदम् नामहरू त्रिभुवन विमानस्थलका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुख डीआईजी निरौला, एसएसपी श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत भएको प्रहरीमा बयान दिएका थिए ।
प्रहरीको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सुन तस्करीको आम्दानीबाट विभिन्न प्रहरी अधिकृतसमेतलाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिइएको थियो । तस्करीको सुन अन्य प्रहरी अधिकृतहरूको संलग्नतामा निरौला बस्ने स्थानसम्म पुर्‍याइएको खड्काले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक खनाल र नायब उपरीक्षक राउतले प्रहरीमा दिएकै बयान अदालतमा पनि दोहोर्‍याएका छन् । आफूहरूले संगठनले दिएको दायित्व निर्वाह गरेको र त्यसविपरीत कुनै गतिविधिमा संलग्न नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
सुन भरिया भनिएका सनम शाक्यको फागुन १८ मा भएको हत्यापछि अनुसन्धानमा खटिंदा केही प्रतिवादीलाई चिने पनि तस्करीलगायत आपराधिक गतिविधिमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको अरू तत्कालीन प्रहरी अधिकारीले बयानमा खुलाएका छन् ।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी, नायब उपरीक्षक प्रजित केसी र नायब निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलले संगठनले खटाएअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा केही प्रतिवादीहरूसँग चिनजान भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले अरू प्रतिवादीको भनाइका आधारमा अनुसन्धानमा खटिएका बेला मुख्य आरोपीसहितका अभियुक्तलाई भाग्ने मौका दिएको र सघाएको आरोप उनीहरूलाई लगाएको थियो ।
प्रहरीले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएको अभियोगपत्रमा तस्करीमा संलग्न समूहका सदस्यहरूले विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरूलाई ठूलो रकम दिएर सुन तस्करी गर्न सहज वातावरण बनाएको उल्लेख छ । यही क्रममा प्रहरीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ कर्मचारीसम्मलाई उनीहरूले उपयोग गरेको अभियोगपत्रमा छ । प्रहरीले यो मुद्दाका आरोपी पूर्वडीआईजी निरौलासहितका अधिकारीको समूहका सदस्यसँग पटकपटक टेलिफोनमा कुराकानी भएको विवरण ‘कल डिटेल्स’ बाट पत्ता लागेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्नेबारे सोधेको प्रश्नमा अर्का अभियुक्त एसएसपी लोहनीले माथिल्लो निकायले निर्देशन दिएपछि शाक्य हत्या घटना र तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको जवाफ दिएका छन् ।
लोहनीले खटाएको टोलीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रजित केसीले फागुन १९ गते सुन भरिया शाक्यको शव बरामद गरेको र अभियुक्तहरू टेकराज मल्ल ठकुरीलाई धरानमा, मोहन काफ्ले र नरेन्द्र कार्कीलाई इटहरीमा विश्वासमा पारी निगरानीमा राखेर गोरेलाई पक्रने प्रयासमा मोरङ आएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला गोरेलाई पक्रन सम्भव नदेखिएपछि जिल्ला प्रहरी मोरङलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न दशी प्रमाणसहित जिम्मा दिएको बताएका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या मुद्दामा प्रहरीले कुल ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अरू ३३ जना फरार छन् । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत बुधबार १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतमा बिहीबारदेखि थुनछेकको बहस सुरु हुँदैछ । प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न बुधबारसम्म ४४ जना कानुन व्यवसायीले ‘वकालतनामा’ दर्ता गराइसकेका छन् । बिहीबार काठमाडौं र अन्य जिल्लाका कानुन व्यवसायीले पनि वकालतनामा दर्ता गराउने भएका छन् ।
सरकार पक्षबाट बहस गर्न जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वकिललाई सघाउन सरकारी वकिलहरूको समूह बनाइएको छ । समूहमा उच्च अदालत विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुली, उपन्यायाधिवक्ता हिमालय त्रिताल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वस्ती र रोहितकुमार पोखरेल छन् ।
समूहका सदस्य पाठकका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा तीन जनामात्र वकिल छन् । विपक्षीतर्फ भने सयजनाभन्दा बढी वकिलको सहभागिता हुने अवस्था छ । कम जनशक्तिले सरकारका लागि बहसलगायत प्रक्रियामा सम्भव नहुने भएकाले सघाउन समूह बनाइएको उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार यसरी सघाउन काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एकजना सहन्यायाधिवक्ता पनि आउने तयारी छ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दामा सहयोगका लागि राजविराज र धनकुटालगायतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:४७